ရွှေမြို့တော်မိမိ စာမျက်နှာမိမိဘလော့ပို(စ့်)မိမိအကြောင်းအရာများမိမိသူငယ်ချင်းများမိမိအဖွဲ့များအခက်အခဲတင်ပြရန်မိမိအိမ်ပြင်ဆင်နည်းCSS ကုတ်များမိတ်ဆွေဖိတ်ခေါ်ရန်ဆိုဒ် creatorထံစာပို့ရန်gmailဖလှယ်ရန်မြို့သူ/သားဗီဒီယိုများFlash Songsမိမိဓာတ်ပုံများမိမိဗီဒီယိုများတင်ရန်ကိုယ်ပိုင်ကဗျာတင်ရန်ပြည်တွင်းသတင်းတင်ရန်ပြည်ပသတင်းတင်ရန်ရခိုင်စာပေတင်ရန်ကိုယ်ပိုင်ဘလောဂ်တင်ရန်မျှဝေပိုစ်များတင်ရန်flashသီချင်းတင်ရန်ဗွီဒီယိုတင်ရန်သီချင်းတင်ရန်ဟာသတင်ရန်နည်းပညာပိုင်းတင်ရန်ဥာဏ်စမ်းတင်ရန်ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲများဥာဏ်စမ်းများစကားထာဖွတ်ကြမယ်ဆိုဒ်လမ်းညွန်တက္ကသိုလ်စာသင်ဝိုင်းအကူအညီနေ့စဉ်သတင်းပြည်တွင်းသတင်းပြည်ပသတင်းဖိုရမ်စကားပြောခန်းဘလော့များ
ဧပြီလ 26, 2015 တွင် 10:24am အချိန် အောင်မြင့်မြတ် မှတင်ပြခဲ့ပါတယ်0မှတ်ချက်
android version 4.0အထက်မှာမြန်မာစာကို smart zawgyi (ဇ)နဲ့ပြင်ရင်တစ်ချို့တွေမှာအဆင်မပြေပါဘူး။အဲဒါကိုပြင်ဖို့အတွက်mm aioကိုxml methodသုံးရင်အဆင်ပြေပါတယ်။ဒါရိုက်linkတော့ကျွန်တော့်ဆီမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့www.thihahtike.blogpost.comမှာရှိပါတယ်။linkရှိသူများလည်းတင်ပေးကြပါ။
ဧပြီလ 25, 2015 တွင် 11:06pm အချိန် အောင်မြင့်မြတ် မှတင်ပြခဲ့ပါတယ်0မှတ်ချက်
တားပိုင်ခွင့်ဆိုတာ..... ငါ့မှာ မရှိတာ ......
တကယ်တော့ အချစ်ဆိုတာ....... လုပ်ယူလို့မှမရတာဟာ ........
09970401876 ............. ကောင်မလေး..................
ဧပြီလ 25, 2015 တွင် 5:20pm အချိန် ချစ်လူစိုးလေး မှတင်ပြခဲ့ပါတယ်0မှတ်ချက်
....**.ကောင်မလေးရယ်**.... ...... မျှော်လင့်ချက်တွေကင်းမဲ့သွားသလိုအရာအားလုံးဟာလည်းဆန့်ကျင်ဘက်..... .......တစ်ခြားတစ်ဘက်ကိုပြေးဝင်နေတဲ့..မင်းခြေလှမ်းတွေကလဲ အသက်ဝင်လျှက်.. ......ဒီိလိုပါပဲ ကြေကွဲနေတဲ့ငါ့ နှလုံးသားလေးကလည်း အသက်ဝင်လျှက်ပါပဲ .. ...... ငါ့ရင်ခွင်မှာကြွေကျနေတဲ့ ဒဏ်ရာ အစပိုင်းတွေကလဲ အစဉ်သာပျံလွင့်နေစဲပါပဲ.... .......မင်းက်ိုဘယ်လိုမှမမေ့န်ိုင်ခဲ့တဲ့ငါ့ နှလူုံးသားလေးကိုအလွမ်းဝေဒနာဆ်ိုးတွေကလဲ .......ထိုးနှက်ကာ… ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန် ချစ်သူအတွက်
ဧပြီလ 25, 2015 တွင် 4:55pm အချိန် ချစ်လူစိုးလေး မှတင်ပြခဲ့ပါတယ်0မှတ်ချက်
................... ငါအလိုခြင်ဆုံးနဲ့ အမျှေုာ်လင့်ဆူံး ဖြစ်တဲ့
ဆက်လက်ဖတ်ရှု့ရန် ဘလော့ တင်ရန်
အားလုံး ကြည့်ရန် ဗီဒီယိုများ
မာရဇ္ဇ - ချစ်လို့ - YouTube suhlainglay23 တင်သွင်းခဲ့သည်0မှတ်ချက်
"Beauty And A Beat" - Justin Bieber (Alex Goot, Kurt Schneider, and Chrissy Costanza Cover) ++ နယ်စားကြီးငလင်း++ တင်သွင်းခဲ့သည်0မှတ်ချက်
Hlwan Paing Vs J Ki - အချိုးပြင်(A Choe Pyin) (Mobile) kyawzay တင်သွင်းခဲ့သည်0မှတ်ချက်
ခတ္တာ အခု အချိန်တွင် မြို့တော်၌ ၀င်ရောက်နေသည့်
ယမင်း အခု အချိန်တွင် မြို့တော်၌ ၀င်ရောက်နေသည့်
အဖွဲ့ဝင် 10 ဦး
ကဗျာ ကဏ္ဍတွင် ++ နယ်စားကြီးငလင်း++ မှစတင်ပြီး. လွန်ခဲ့သော 10 နှာရီ က မိုး နောက်ဆုံးဝေဖန်ပြောဆိုချက် ထည့်ခဲ့သည်3ခါပြန်လည်ပြောဆိုထားသည်
ကဗျာ ကဏ္ဍတွင် ကောင်ကလေး မှစတင်ပြီး. လွန်ခဲ့သော 10 နှာရီ က မိုး နောက်ဆုံးဝေဖန်ပြောဆိုချက် ထည့်ခဲ့သည်3ခါပြန်လည်ပြောဆိုထားသည်
အလွှာ ၃ ပါး --------------
ကဗျာ ကဏ္ဍတွင် ☾☆★¸¸.•*ရာမ-မင်းသားလေး ☾☆★¸¸.•* မှစတင်ပြီး. လွန်ခဲ့သော 11 နှာရီ က မိုး နောက်ဆုံးဝေဖန်ပြောဆိုချက် ထည့်ခဲ့သည်2ခါပြန်လည်ပြောဆိုထားသည်
ဟာသ ကဏ္ဍတွင် ကောင်မလေး မှစတင်ပြီး. လွန်ခဲ့သော 11 နှာရီ က မိုး နောက်ဆုံးဝေဖန်ပြောဆိုချက် ထည့်ခဲ့သည်2ခါပြန်လည်ပြောဆိုထားသည်
လွန်ခဲ့သော 11 နှာရီ.မှာ ကဗျာ ကဏ္ဍတွင် Mr...Naung မှစတင်ထည့်သွင်းခဲ့သည်0ခါပြန်လည်ပြောဆိုထားသည်
ကဗျာ ကဏ္ဍတွင် lwannaythu မှစတင်ပြီး. လွန်ခဲ့သော 14 နှာရီ က ရေပြင် နောက်ဆုံးဝေဖန်ပြောဆိုချက် ထည့်ခဲ့သည် 45 ခါပြန်လည်ပြောဆိုထားသည်
ကဗျာ ကဏ္ဍတွင် ☾☆★¸¸.•*ရာမ-မင်းသားလေး ☾☆★¸¸.•* မှစတင်ပြီး. လွန်ခဲ့သော 18 နှာရီ က အောင်အောင် နောက်ဆုံးဝေဖန်ပြောဆိုချက် ထည့်ခဲ့သည်2ခါပြန်လည်ပြောဆိုထားသည်
မန်မာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ၁ ဦး ဘန်ကောက်တွင် တိုက်ပေါ်က ပြုတ်ကျသေဆုံး
ပြည်တွင်းသတင်း ကဏ္ဍတွင် +ဒဿ+ မှစတင်ပြီး. မနေ့ က ko thein htay နောက်ဆုံးဝေဖန်ပြောဆိုချက် ထည့်ခဲ့သည်2ခါပြန်လည်ပြောဆိုထားသည်
ရွှေမြို့တော် ကို သက်သေထားရင်...ချစ်ခြင်းတစ်စုံ
ကဗျာ ကဏ္ဍတွင် နှင်းဆီသခင်မလေး မှစတင်ပြီး. မနေ့ က ☾☆★¸¸.•*ရာမ-မင်းသားလေး ☾☆★¸¸.•* နောက်ဆုံးဝေဖန်ပြောဆိုချက် ထည့်ခဲ့သည် 34 ခါပြန်လည်ပြောဆိုထားသည်
နှလုံးသားတခု ရဲ့ လွမ်းချင်း
ကဗျာ ကဏ္ဍတွင် ကွာန်ကအ် ဗိုတ် မှစတင်ပြီး. မနေ့ က ယဉ်မိုးလှိုင် နောက်ဆုံးဝေဖန်ပြောဆိုချက် ထည့်ခဲ့သည်7ခါပြန်လည်ပြောဆိုထားသည်
ထိပ်သီးလုပ်ဆောင်ချက်များ · လုပ်ဆောင်ချက်အားလုံး အောင်မြင့်မြတ် မှထည့်သွင်းသောဘလော့ဖြစ်သည်နည်းပညာလေ့လာသူများအတွက်ချစ်သူများအတွက်လွန်ခဲ့သော 16 မိနစ် ☾☆★¸¸.•*မယ်သီတာလေး☾☆★¸¸.•* သည် ☾☆★¸¸.•*ရာမ-မင်းသားလေး ☾☆★¸¸.•* အတွက်မှတ်ချက် အမှတ်တရရေးခဲ့သည်"ဘယ်လိုလဲ ကို အကောင့်ကလုပ်လို့ရလား မယ်သီတာဝင်ကြည့်တာတော့မရဘူးဖြစ်နေတယ်
"လွန်ခဲ့သော 32 မိနစ် blackroselay သည် ♫M♪r.D♪r♪a♪c♪u♪a♫ အတွက်မှတ်ချက် အမှတ်တရရေးခဲ့သည်"လာလည်တယ်နော်"လွန်ခဲ့သော 34 မိနစ် zinkoaung သည် zinkoaung အတွက်မှတ်ချက် အမှတ်တရရေးခဲ့သည်"ကျေးဇူးပဲအိမ်လာလည်လို့
သယ်ရင်းအားလုံးကိုအားနာလိုက်တာ"လွန်ခဲ့သော 49 မိနစ် AyeMyatMon သည် လှမင်းဥိး အတွက်မှတ်ချက် အမှတ်တရရေးခဲ့သည်"နေကောင်းလား"လွန်ခဲ့သောတနာရီminzaw မှထည့်သွင်းခဲ့သောသီချင်းဖြစ်သည် play ﻿ａlin Yin Myit [ MAMC ] - ﻿ｃhill Session [ MAMC ] ﻿ｗeed Thay Tha [ MAMC ] လွန်ခဲ့သောတနာရီaungaung သည်++ နယ်စားကြီးငလင်း++၏ဖိုရမ်တွင်းစာပေ နွေအိပ်မက်ကိုကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့သည်လွန်ခဲ့သောတနာရီမိုးဇက် သည်sanlin၏ဖိုရမ်တွင်းစာပေ အလင်းရိပ်မှာ ပုန်းနေရတဲ့ဘ၀ကိုကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့သည်လွန်ခဲ့သော9နှာရီမိုး သည် ++ နယ်စားကြီးငလင်း++ ၏ဖိုရမ်တွင်းစာပေ နွေအိပ်မက်တွင် ပြန်လည်ပြောဆိုချက် ထည့်ခဲ့သည်"အားပေးသွားပါတယ်"လွန်ခဲ့သော 10 နှာရီမိုး သည် ကောင်ကလေး ၏ဖိုရမ်တွင်းစာပေ နှလုံးသားရဲ့ဆုတောင်းသံတွင် ပြန်လည်ပြောဆိုချက် ထည့်ခဲ့သည်"အားပေးပါတယ်နော်"လွန်ခဲ့သော 10 နှာရီမိုး သည် ☾☆★¸¸.•*ရာမ-မင်းသားလေး ☾☆★¸¸.•* ၏ဖိုရမ်တွင်းစာပေ အလွှာ ၃ ပါး --------------တွင် ပြန်လည်ပြောဆိုချက် ထည့်ခဲ့သည်"ဖတ်ရှုအားပေးသွားပါတယ်"လွန်ခဲ့သော 11 နှာရီမိုး သည်☾☆★¸¸.•*ရာမ-မင်းသားလေး ☾☆★¸¸.•*၏ဖိုရမ်တွင်းစာပေ အလွှာ ၃ ပါး --------------ကိုကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့သည်လွန်ခဲ့သော 11 နှာရီ နောက်ထပ် RSS
လက်ဆောင်ပေးရန်ala
လက်ဆောင်ပေးရန် aoker kyaw
လက်ဆောင်ပေးရန် © 2015 Created by လူသစ်. Badges | ပြဿနာတခုခုတင်ပြရန် | Terms of Service